Soo Bandhigida Sabuur - Injiilka oo ku qoran af-soomaali
Dawood ama Daa’uud (sidoo kale David – NNKH) waa mid aad muhiim ugu ah nebiyada dhexdooda. Nebi Ibraahim (NNKH) ayaa bilaabay wakiilnimdiisa cusub (waxa weeye jidka Ilaah ee la xidhiidhka dadka) ballankii Faracoodii iyo quruun weyn – Ka dibna siiyey allabari weyn. Nabi Muuse (NNKH) oo ka xoreeyay reer binu Israa’iil addoonsigii – Iyada oo Allabariga Kormaridda – Ka dibna wuxuu iyagii siiyey Sharci si ay u noqondaan quruun. Laakiin waxa ka dhinnaa waa boqor, kaasoo u talin lahaa sidan oo kale in ay helaan barakada halkii inkaarta xaga Ilaah ka yimid. Daa’uud (NNKH) waxa uu ahaa boqorkaas iyo nebigaas. Waxa uu bilaabay wakiilnimada kale – halka Boqorradda ay talada hayaan xagaas Yeruusaalem.
Kumuu ahaa Boqor Daa’uud (David – NNKH)?
Waxaad ka arki kartaa waqtiyada ee taariikheedka reer binu Israa’iil, wakhti taariikheedka reer Binu Israa’iil, in Daa’uud (NNKH) waxa uu noolaa muddadii 1000 BC, kun sano ka dib markii Ibraahim (NNKH) iyo 500 oo sano ka dib Muuse (NNKH).
Daa’uud (NNKH) waxa uu ku bilaabay sida adhijirku u kalimo idaha qoyskiisa. Oo cadaawaha ugu weyn oo reer binu Israa’iil – Jaaluud – hoggaamiyey ciidan qabsaday reer binu Israa’iil, oo reer binu Israa’iil ah ayaa niyad jab ku timid oo waa laga adkaaday. Daa’uud (NNKH) si kastaba ha ahaatee loolan Jaaluud iyo isaga oo ku dilay dagaalkii. Waxay ahayd mid cajiib ah in wiil dhalinyaro ah oo adhijir ahi u gaysan karto askari awood weyn oo uu Daa’uud (NNKH) ku noqday caan. Markaasaa reer binu Israa’iil ka adkaadeen cadaawayaashooda. Quraanku waxa uu inoo sheegayaa dagaalka u dhexeeya Daa’uud (NNKH) iyo Jaaluud Aayadahan soo socda
Markaasay (Mu’miniintii) jabiyeen Gaaladii idinka Eebe, wuuna dilay Daa’uud Jaaluud, wuxuuna siiyey Eebe Daa’uud xukun iyo xigmo (Nabinimo iyo Cilmi) wuxuuna baray wuxuu doono, hadayan jirin ku reebidda Eebe dadka qaarkood qaarka (kale) waxaa fasaadi lahaa dhulka haseyeeshee Eebe waa fadli u saaxiib (u deeqe) Caalamka
Aayadda 2:251 – Al-Baqarah
Daa’uud caanimadiisa sida dagaalyahan ayaa sii xoogaystay ka dib markii dagaalkan. Si kastaba ha ahaatee, wuxuu noqday Boqor oo kaliya ka dib markii waayo aragnimo dheer oo adag maxaa yeelay, wuxuu ahaa mid cadow badan, labada dibadda iyo reer binu Israa’iil, ayaa isaga ka soo horjeeda. Buuggaagta ee aniga iyo II Samuu’eel ee Kitaabka Quduuska ah (al Kitab) sheekeeyo, kuwaasoo halgankii iyo guulshii ee Daa’uud (NNKH). Samuu’eel (NNKH) wuxuu ahaa nebigii subkay Daa’uud (NNKH) sidii Boqor.
Daa’uud (NNKH) ayaa sidoo kale wuxuu caan ku ahaa sida muusikada oo uu Ilaaheey u curiyey in ka kooban heeso iyo gabayo qurux badan. Tani waxa lagu sheegay Quraanka aayadahan soo socda
Ku Samir (u adkayso waxay sheegi xusuusana addoonkaygii Daa’uud ahaa ee xoogga lahaa, wuxuuna ahaa noqosho (Toobad keen) badane. Annagaa u sakhirray (u fududaynay) Buuraha, wayna la tasbiix sadaan galab iyo subaxba. Shimbirahana waa loo kulmiyey, dhamaantoodna waxay u noqdaan (adeecaan) Eebe. Waana adkaynay xukunkiisa (Daa’uud) waxaana siinnay xigmad (Nabinimo) iyo fahmo iyo hadal caddayn (iyo garsoorid).
Aayadda 38: 17-20 Saad
Aayaadkani waxay xaqiijinayaan dagaalyahan Daa’uud xoogiisa (NNKH), laakiin sidoo kale ‘mahadda’ oo waxay ahayd sida ugu quruxda badan, sida gabayadii shimbiraha ee uu u mariyey abuuraha. Markaasaa Boqorkii waxaa la ‘siiyey’ xigmadda ‘hadalka’ oo uu Ilaah siiyey Isaga qudhiisu. Heesahan iyo gabayaddan ee Daa’uud (NNKH) waxaa lagu duubay oo lagu kaydiyey buuggii ugu horeeyey ee Sabuur (ama Saboor) – waxa loo yaqaan Sabuur. Sababtoo ah xigmadda hadalkiisa waxaa isaga siiyey Ilaah, Diiwaankan ee Daa’uud (NNKH) wuxuu ahaa mid Quduus ah oo sidoo kalena loo waxyooday sidii Tawreedka . Quraanku waxa uu sharaxayaa sida tan:
Eebahaana waa ogyahay waxa ku sugan samooyinka iyo dhulka, dhab ahaan baana ugu fadilnay Nabiyadda qaarkood qaarka (kale) waxaana siinay Nabi Daa’uud Sabuur.
Aayadda 17:55 – Isra
Suleeman – oo sii waday Sabuur
Laakiinse kuwanu waa qoraallo loo soo waxyooday oo kumaysan soo afjarinmin Daa’uud (NNKH) kaasoo ku dhintay da’ weyn isagoo ah Boqor. Wiilkiisa oo dhaxalka lahaa waa Suleeman (ama Sulaymaan – NNKH), sidoo kalena waa loo soo waxyooday Ilaah baana siiyey xigmad. Quraanku wuxuu ku tilmaamay sidan:
Waxaan siinnay Nabi Daa’uud (wiilkiisa) Suleymaan ahaa wuxuuna ahaa addeec (Eebe) oo fiican toobad keen badan.
Aayadda 38:30 – Saad
Xusuuso (Nabi) Daa’uud iyo (Nabi) Suleymaan markay xukumayeen Beerta markuu daaqay adhi qoom (dad) waxaana ahayn kuwa xukunkooda u maraga (arka). Waxaana fahansiinay Sulaymaan, dhammaanna waxaan siinnay xukun iyo cilmi, waxaana u sakhirray Daa’uud buuraha iyagoo la tasbiixsan iyo shimbiraha waana fallaa “karraa”.
Aayadda 21: 78-79 – Anbiyaa
Waxaan siinnay Daa’uud iyo Sulaymaan cilmi, waxayna dheeheen mahad Ilaah baa iska leh ee ah kan naga fadilay wax badan oo addoomadiisa mu’miniinta ah!
Aayadda 27:15 – Naml
Sidoo kale Suleeman (NNKH), waa sii waday isagoo intaa ku daray buuggaagta loo waxyooday ee xigmadda Sabuur. Kulubtiisa waxaa loo yaqaan Maahmaahyadii, Eesleesiyaastiyaas, iyo heesihii Sulaymaan.
Sabuur oo sii socotay iyadoo Nabiyadii kalena ay sii wadeen
Laakiinse dhimashadii Suleeman (NNKH), Boqorraddii ka dambeeyey kumaysan guulaysay in ay raacaan Tawreedka iyo kuwii ka midka ahaa boqorradii ka dambeeyey lama siiniin farriimo loo soo waxyooday. Kaliya Daa’uud iyo Suleeman (NNKH), dhammaan boqorraddii reer binu Israa’iil oo dhan, haddaan qoraallada waxyiga Ilaah – waxay ahaayeen nebiyo iyo sidoo kale boqorro. Laakiin boqorradii ka dambeeyey Suleeman, Ilaah baa soo diray nabiyo sida farriimo digniineed. Yunus (ama Yoonis) Nebi liqay kalluun weyn oo ahaa mid ka mid ah nebiyadaas (Surah 37: 139-144). Tani waxay sii socotay qiyaastii 300 sano – iyadoo nebiyo badan la soo diray. digniintooddii, qoraallada iyo nebiyadda ayaa sidoo kale lagu daray buuggaag loo soo waxyooday ee Sabuur. Sida halkan lagu sharaxay, ahaayeen reer binu Israa’iil oo ugu dambayntii la qabsaday oo ay tarxiileen Baabuloon loona tarxiilay Baabuloon, Markaasay Yeruusaalem ku noqdeen oo hoos yimaadeen Cayruus, aasaasihii Boqortooyaddii reer Faaris ahaa. Iyada oo wakhtigan nebiyadii sii socdeen lana soo diray si ay farriimaha u sii gudbiyaan – iyadoo fariimahaasi lagu qoray buugaagtii ugu dambaysay ee Sabuur.
Sabuur – sugidii imaantinka Masiix
Oo nebiyadani oo dhammi waa kuwo muhiim noo ah sababtoo ah, oo ku dhex jira digniinahooda, waxay sidoo kale dhigeen aasaaskii Injiil. Dhab ahaan, horyaalka ‘Masiix’ waxaa soo bandhigay Nabi Daa’uud (NNKH) markii hore Sabuurka (qayb ka mid ah Sabuur ee uu ku qoray) iyo nebiyada ka dib sii sheegay in faahfaahin dheeraad ah oo ku saabsan Masiix soo socdo. Tani waxay ahayd gaar ahaan muhiimad la siiyey fashilka Boqorraddii ka dib in ay raacaan Tawreedka, iyo fashilaadda reer binu Israa’iil uu u hogaansamaan Ammarradda. Ballanqaadkii, rajo iyo doonista Masiix imaanshihiisa ayaa la sii sheegay in macnahaasi ka dambeeyo guud ahaa guuldarradda dadka maalintaas. Sida nebiyada iyagoo eegaya mustaqbalka, sida Muuse (NNKH) ayaa loo baahan yahay Tawreedka. Oo waxa la sheegay kuwan la hadlaysa annaga ee maanta casriga ah kuwa naga mid ah, kuwaas oo sidoo kale ku guuldareystay in ay ku noolaadaan sida saxda ah, waxaynu og nahay inaannu. Masiix waxay ahayd in uu noqdo tiir rajo meel fashilku ku badan yahay.
Sidee Ciise Masiix (NNKH) u arkay iyo sida uu u isticmaalay Sabuur
Dhab ahaan, nebi Ciise Masiix qudhiisu waxa uu isticmaalay Sabuur si uu u caawiyo saaxiibbadiis iyo kuwa raacsan isaga si ay u fahmaan Injiil iyo doorkiisa Masiix. Waxa ay leedahay waxa ku saabsan Ciise Masiix in
Markaasuu ka bilaabay Muuse iyo nebiyada oo dhan, Qorniinka oo dhanna ayuu uga micneeyey wixii isaga qudhiisa ku saabsanaa.
Odhaahda ‘iyo nebiyada oo dhan “waxa loola jeedaa nebiyadan ee Sabuur waxay raaceen Tawreedkii Muuse (NNKH). Ciise Masiix (NNKH) wuxuu doonayay in saaxiibbadiis fahmaan sida Sabuur u bareen oo isaga ka sii sheegay imaantinkiisa wax ku saabsan. Ciise Masiix (NNKH) ka dibna sii waday in uu baro iyaga:
Wuxuu ku yidhi, “Kuwani waa hadalladaydii aan idinkula hadlay intii aan weli idinla jiray. Waa inay noqdaan wax walba oo sharciga Muuse iyo nebiyadii iyo sabuurrada laygaga qoray oo igu saabsanaa. Markaasuu garashadooda u furay si ay u gartaan Qorniinka.”
Marka ay halkan waxaa loola jeedaa ‘Nebiyadii iyo Sabuurrada’ waxaa loola jeedaa buugga ugu horeysay ee Sabuur ee uu Daa’uud qoray (Sabuur) kadibna buugaagta ka dib in lagu daray (‘Nebiyadii’). Ciise Masiix (NNKH) loo baahan yahay in ‘furo fikirradoodii’ ka dibna kaliya ay awoodaan in ay ‘fahmaan Qorniinka ” (micnaheedu yahay Kutubtii muhiimka ah Tawreed iyo Sabuur) noqon lahaa. Hadafkayagu ee taxanahan xiga ee maqaalladan waa in la raaco waxa Ciise Masiix (NNKH) tusnay Buuggaagtan si aan aad u furi kartaa maskaxda iyo kadibna aad fahmi kartaan Injiilka.
Daa’uud (NNKH) iyo Nebiyadii ee Sabuur Jadwal Taariikheedka
Muuqaalkan hoose ayaa koobaya ugu (laakiin dhammaantood ma’ahan maadaama uusan jirrin qol dhammaantood iskuga keenni kara) nebiyadaas. Dhererka ulaha gudban waxay muujinayaa nolosha qofkasta oo Nebi gaar ah. Midabka ku xardhan Jadwal Taariikheedka waxaa daba socdaa xaaladda reer binu Israa’iil, si la mid ah sidii markii aan raacnay taariikhdooda ka ah barakada iyo inkaarta of Muuse.
Waxaan la sii sheegidda sii: Calaamada wiil ka dhalan doona gabadh Bikrad ah
Tags:Biography NebiBiography Nebi quduuska ahBiography of NNKH Nebi quduuska ahDaa'uudDaawuudDaawuud in zaburDaawuud iyo Luuxul MaxfuudkaDavidDavid in IslamDavid QuraankaIsa al Masih iyo Luuxul MaxfuudkaIsa al Masih iyo zaburIsa iyo Luuxul MaxfuudkaIsa iyo zaburkuwaas oo ahaa Dawood (NNKH)kuwaas oo ahaa SuleymaanLuuxul MaxfuudkaNabiga DaawuudNabiga davidNabiga SuleimanNebi Daa'uud QuraankaNebi Yunusnolosha NebiPsalms in Islamsabuurro iyo Luuxul Maxfuudkasabuurro iyo zaburSaleebaanSulaymaanSulaymaan in IslamSulaymaan QuranSuleiman in zaburSuleiman Luuxul MaxfuudkaSuleiman Quraankataariikhda reer binu Israa'iilwaxa Luuxul Maxfuudkawaxa zaburzabur